बालबच्चासँग दसैँ-तिहार कसरी मनाउने?:: Naya Nepal
बालबच्चासँग दसैँ-तिहार कसरी मनाउने?
दसैँतिहार नजिकिँदै छ। यसैबीच अभिभावकहरुको जिम्मेवारी अझ थपिएको छ। कोभिड -१९ को महामारी एकातिर छ भने चाडपर्व र बालबालिकाहरुको जिम्मेवारी अर्कोतिर।अकस्मात आइपरेको यो महामारीले हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउनुको साथै बालबालिकाहरुको जिम्मेवारी, कसरी घरमा सिकाउने, कसरी पढाउने, कसरी नानीबाबुहरु सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न नउठेको होइन। अब त झन् दसैँ र तिहारमा आ- आफ्नो संस्कृति र संस्कार अनुरुप थप जिम्मेवारीहरु हुन्छन्, जुन यो समयमा पहिले झै पूरा गर्न सजिलो छैन।धेरै अभिभावकहरु यो समयमा चिन्तामा हुनुहुन्छ कि कसरी आफ्नो नानीबाबुहरुलाई व्यस्त राख्ने जसले उनीहरुको सर्वाङ्गीण विकास होस्। चाडपर्वको बेलामा हाम्रो नानीबाबुहरुको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुर्‍याउन हामी के गर्न सक्छौँ, निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्नसक्छौँ :
-सँगै बसेर योजना बनाउनुहोस्: दसैँ र तिहारको छलफल गर्दा यो नभुल्नुहोस् कि तपाईंको नानीबाबु पनि त्यही परिवारको हिस्सा हो। सँगै राख्नुहोस्, ऊसँग पनि उसैले बुझ्ने भाषामा या शैलीमा भोलिको दिनको योजना बनाउनुहोस्। योजनाअनुरुप भोलिको दिन व्यतीत गर्नुहोस्। जसले गर्दा नानीबाबुहरुले भोलिको दिनमा योजना बनाउन र योजना अनुरुप कार्य सम्पादन गर्न सिक्नेछन्।
-सहयोग माग्नुहोस्: नानीबाबु सानै छन् भनेर सहयोग लिन नहिच्किचाउनुहोस्। यो याद राख्नुहोस् कि आमाबाबाको नजरमा आफ्नो सन्तान जहिले पनि सानै हुने गर्दछ। उसले गर्न सक्ने काममा सहयोग माग्नुहोस् जसले गर्दा उसमा सहयोगको भावना विकास हुन्छ। सहयोग गरी रहँदा उसमा शारीरिक र मानसिक विकासले पनि गति प्राप्त गर्दछ।
-चाडपर्वको महत्त्व बुझाउनुहोस्: हामीले दशै र तिहार किन मनाउदै छौँ? यो हाम्रो लागि किन महत्वको बिषय बनेको छ? यो पर्व मनाइरहनु पछाडिको कारण के छ? त्यसलाई प्रष्ट बनाइदिनुहोस्। यसबारे छलफल गर्नुहोस्। यसैलाई सिर्जनात्मक कार्यसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने (नवदुर्गा) रङ भर्न, चित्र बनाउन, सोचेर उसैलाई कथा लेख्न, माटो या पिठोको माता दुर्गा बनाउन दिन सक्नुहुन्छ (स्तर हेरेर)- जुन दैनिक योजनामा पनि समेट्न नभुल्नुहोला। यसो गर्दा नानीबाबुहरुको बौद्धिक विकासमा पनि टेवा पुग्छ।
-स्वस्थकर खाना: चाडपर्व भन्नासाथ मिठाइ, चिसो या पेय पदार्थ , पत्रु खाना (जंक फुड) हरु घरमा भित्रिन थाल्दछ। यो बिषम परिस्थितिमा पाहुना थोरै नै भित्रिनु भए पनि नानीबाबु भएको घरमा उनीहरुको निमित्त चक्लेट या अरु नै पत्रु खाना (जंक फुड) लिएर आउने या जाने गर्छौ। त्यसैले कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ या कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता खानालाई प्रवेश नदिउँ। यदि सकिँदैन जस्तो लाग्छ भने सकेसम्म यसलाई कम प्रयोग गरौँ। घरमा नै स्वस्थकर खाना बनाऔँ अनि स्वस्थ खाने बानी बसालौँ।
-रोल मोडेलको रुपमा प्रस्तुत हुनुहोस्: दसैँ तिहार या चाडपर्वमा मात्र नभएर अघि पछि पनि हामी रोल मोडेलको रुपमा अभिभावकहरु प्रस्तुत हुनुपर्दछ। भनिन्छ नि सुनेर भन्दा पनि देखेर, हेरेर हाम्रा नानीबाबुहरु या हामी आफैँले पनि धेरै कुराहरु वरपरको वातावरणबाट सिकिरहेको हुन्छौँ। यदि घरमा आफूभन्दा ठूलोलाई भेट गर्दा ढोग गर्ने संस्कार छ भने हाम्रो नानीबाबुहरुले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। यदि तपाईंले व्यवहारमा प्रदर्शन गर्नुहुन्न, सिवाय यो गर या त्यो गर भन्न बाहेक भने, मान्नुहोस् तपाईंको नानीबाबुले तपाईंले देखाउनु भएको बाटो होइन, तपाईंले हिँड्नु भएको बाटो पछ्याउने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि तपाईंले भन्नु भएको बाटो लाग्दै हुनुहुन्छ भने पनि बाध्यताले, प्रश्नैप्रश्न बोकेर, भ्रममा रहने भन्ने सम्भावना प्रवल हुनसक्छ।
-समभाव राखौँ: हाम्रो नानीबाबुहरु हाम्रै अंश हुन्। जस्तो हाम्रो भावना हुन्छ त्यस्तै नै उनीहरुमा पनि हुन्छ, जस्तो हामीलाई कुनै कुरा लाजमर्दो हुन्छ त्यस्तै उनीहरुलाई पनि हुन्छ। फरक यत्ति हो, जसरी हामीले आफ्नो भावनाहरुलाई शब्द दिन सक्छौँ त्यस्तो उनीहरुसँग आफ्नो भावना पोख्ने शब्द हुँदैनन्। त्यसैले त व्यवहारमा देखाउँछन्। जस्तै: नानीबाबुको गल्ती (जुन तपाईंलाई रमाइलो लागेको) साथीलाई भनी रहनु हुँदा, तपाईंको पछाडि लुकेर या अर्को कोठामा जानु भएर या विषय वस्तु बदल्न खोजेर व्यक्त गर्छन्। कहिले सोच्नु भएको छ, किन यसो गर्दैछन् हाम्रा नानीबाबुहरुले भनेर? किन कि उसमा पनि तपाईंमा झैँलाज छ, अप्ठ्यारोपन छ।
-प्रशंसा गर्नुहोस्: मानिसहरु प्रशंसा चाहन्छन्, फरक यति हो, कसैलाई धेरै चहिएला कसैलाई अलि थोरै भए पुग्ला। जसरी हामीले खाना बनाँउदा, कति मिठो खाना भनेर होस् या कुनै लुगा लगाउँदा– कति राम्रो देखिएको भनेर होस्- प्रशंसा सुन्न मन पराउँछौँ। नानीबाबुहरुमा पनि यो कुरा लागू हुने भएकोले यदि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, या कुनै काम गर्न कोशिश मात्र पनि गर्दै हुनु हुन्छ भने प्रशंसा गर्न नचुक्नुहोस्। बानी व्यवहारहरुको संरचना गर्न तथा सुधार्न यसले ठूलो भूमिका खेल्छ। जुन व्यवहार परिवर्तन ल्याउन अथवा निरन्तरता देओस् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ भने प्रशंसा गरिदिनुहोस्। घर परिवारभित्र मात्र नभएर कोही साथीभाइ या इष्टमित्रको अगाडि उसले सुन्ने गरी प्रशंसा गर्नु भयो भने उसमा कुनै पनि व्यवहारप्रति सकारात्मक प्रभाव छिटो पर्ने गर्दछ। त्यसैले उसलाई ग्लानि हुने खालको कुरा गर्नुभन्दा उसलाई गर्व हुने खालको कुराहरु (यथार्थ न कि बनावटी) गर्नुहोस्। यसले गर्दा परिवार बाहिर लाजले शिर निहुराउनुभन्दा गर्वले शिर उच्च राख्ने मौका प्रदान गर्छ। साथै आमाबाबाप्रतिको विश्वास सदैव कायम रहन्छ। प्रशंसाले उहाँहरुको मानसिक र भावानात्मक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्दछ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकास्थित पिलधारामा वर्षौँ अघि सुरु गरिएको सिँचाइ योजना अलपत्र परेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्वर २ पिपलधाराको बन्ज्याङ्ग सिँचाइ योजना अलपत्र परेको हो । साविक पिपलधारा गाविस वडा नम्वर ३ को बन्ज्याङ्ग गाउँका झण्डै सय घरधुरी जनताका लागि २०७०/०७१ सालतिर तत्कालिन सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट त्यस गाउँका खिमबहादुर महतलले योजना पारेर झण्डै ३० लाख मूल्य बराबरको पाइप आफ्नो घरमा झारेका थिए ।सिँचाईसँगै गाउँको खानेपानी समस्या समत समधान गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त योजना पारिए पनि हालसम्म सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी पुरानै खोला नालाको पानी पिउन बाध्य छन् । अहिलेसम्म पनि पाइप महतकै घरमा गोदाम बनाएर राखिएको छ ।धुर्कोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक शिवबहादुर खत्रीले वर्षौँदेखि पाइप व्यक्तिको घरमा खेर गइरहेको प्रति ध्यान पुगेर खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा पुगेर बुझ्दा केही विवरण फेला पार्न नसकिएको बताए ।अब हामी खानेपानी डिभिजन कार्यालयसँग सहकार्य गरेर उक्त पाइप सोही गाउँमा सदुपयोग हुने गरी योजना पारिने उनले बताए । धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेले उक्त पाइपहरु के गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीयसँग र त्यस वडाका अध्यक्ष लगायत सँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने बताए ।